« FIERMADA 2019 » : Hifanome tanana amin’ireo tantsaha ny fitondram-panjakana
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, tetsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka ny andiany faha-21 amin’ny hetsika « Fier Mada. » 8 août 2019
Haharitra dimy andro ny hetsika ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 11 aogositra ho avy izao. Tonga teny an-toerana nanokatra ity hetsika ity ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina sy ireo mpikambana ao amin’ny governemanta. Isan’ny lohahevitry ny « Fiermada » tamin’ity andiany faha-21 ny fikatsahana fampandrosoana maharitra amin’ny alalan’ny fampiasana ireo harena voajanahary eto Madagasikara sy ny fifampiresahana mivantana amin’ireo tantsaha eny ifotony mba hahafahana mamoaka ny vokatra vokariny.
Nampitaraina ny mpikarakara ity hetsika ity hatramin’izany ny faharatsian’ny fotodrafitrasan’ny tantsaha sy ny tsy fahazoan’izy ireo tohana avy amin’ny fanjakana. Nambaran’ny tompon’andraikitra fa « miady irery ny tantsaha satria sady ratsy ny lalana hamoaham-bokatra no tsy misy ny lalam-barotra. » Manoloana izany dia nanambara ny filoha, Andry Rajoelina fa tafiditra ao anatin’ny laharam-pahamehan’ny fanjakana ankehitriny ny fanohanana ny tantsaha na inona na inona sehatra misy azy. Efa maro ny tantsaha notohanana tamin’ny alalan’ny tetikasa « Fihariana », hoy ny filoha ary efa misy lalana hafa ihany koa amin’izao hanampiana mivantana ny tantsaha ka isan’ireny ny fanamboaran-dalana manerana ny faritra maro eran’i Madagasikara.
« Mila mitady lalam-barotra mankany ivelany isika ary mila avoaka ny vokatra any amin’ny faritra rehetra, ka hamoraina ny fahazoan’ireo tanora hiroso amin’ny fandraharahana, ampiana fampiofanana azony ary hampitomboina ihany koa ny tohana ara-bola » hoy ny Filoha Andry Rajoelina. Notsindrian’ny Filoha manokana fa efa mandeha amin’izao fotoana izao ny fanamboarana ny lalana any amin’ireo faritra rehetra mamokatra eto Madagasikara mba hahatratrarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo amin’ny taona 2020, ka isan’ireny ny lalam-pirenena faha-44 sy ny lalam-pirenena mampitohy an’ Ambilobe-Vohamer.
70% nahita lalam-barotra
Ho an’ny minisiteran’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono kosa dia nambaran’izy ireo fa efa nisy ny dingana natao nanatsarana ny fandraharahan’ny tanora. Tafiditra ao anatin’izany ny tetikasa Pejar nanohanana ny tanora hisehatra misimisy kokoa eo amin’ny tontolon’ny famoronana asa. Raha ny tarehimarika dia maherin’ny 70 isan-jaton’ireo olona nampiranty ny vokatra tamin’ny Fiermada tamin’ny taona 2017 no efa nahita lalam-barotra manokana namoahana ny vokatr’ izy ireo tamin’ity andiany faha-21 ity. Nitombo ihany koa ny mpampiraty satria tranoheva manodidina ny 450 eo ho eo no hita teny an-toerana ary saika tazana teny avokoa ireo rehetra mifanaraka amin’ny filan’ny tantsaha toy ny tohana ara-bola, tetikasa hanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana.
Nahatratra hosoka miisa 89 tamin’ny fidirana ho miaramila ETAMAZAORO JENERALIN’NY TAFIKA (290) 20 janvier 2020 Jiolahy mpandroba izy roalahy maty voatifitra fa tsy tanora mpianatra AMBALAKISOA TOAMASINA (261) 20 janvier 2020 Naato tamin’ny asany ny Lehiben’ny Pompiers FIHOTSAHAN’NY TANY TENY AVARADOHA (173) 21 janvier 2020 Miatrika famotorana lalina ny tale jeneraly teo aloha ORINASA KRAOMITA MALAGASY (159) 22 janvier 2020 Nahitana fatim-behivavy tsy nisy loha novonoina tao Analaradjy SAINTE-MARIE (151) 20 janvier 2020 Tovolahy iray namoy ny ainy, novonoina tamin’ny fomba feno habibiana MANANARA AVARATRA (148) 22 janvier 2020